Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XI	2
Posted by Kyaemon on Aug 20, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different |2comments
manadalaygazette.com/224996 မှာ ၎င်း၊ ဒီကိစ္စ ကိုတော်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ တယ်၊
ရေတွေကိုကာပေမဲ့ ရေတွေအမြင့်တခုရောက်ရင် လွှတ်ချရတယ်၊ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ရေကာတာတွေမှာ ရေစီးဆင်းမြဲ စီးဆင်းနေတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါ)
တွေကြောင့်ရေတွေလျှံသွားမှာပေါ့၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဘို့ရေကာတာက ရေလွှတ်လို့ရေတွေကဆက်ပြီးစီးဆင်းရမှာပါ၊
လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်ဘို့မလိုတဲ့အခါ ရေ ကိုအမြဲအလုံ ပိတ်လှောင်ထားရမယ်ဆိုတာ ပုံသေကားချလဲမဟုတ်ပါ၊ တခါတခါ ရေလွှတ်ရပါတယ်၊
ဒီလို ရေ”သမ” ပြီး စီးဆင်းလာတဲ့အတွက် အချို့နေရာမှာတသီးစာမှ နှစ်သီးစာ စိုက်လို့ရနိုင်လိမ့်မယ်၊ ပြေးခုန်ပစ်က တန်းကျော် ခုန်ပြီးပြေးကြရာမှာ အဟန့်အတား တွေကိုချထားရတယ်၊
(တန်းကျော်ပြေးပွဲပုံတွေကြည့်ပါ) (ရေစီးဆင်းပုံတွေကိုလဲClick ကလစ် တချက်နှစ်ချက်လောက်နှိပ်ရင်ပုံကြီးကြီးကြည့်နိုင်တယ် ရေတွေ
အရှိန်ပြင်း ရေတွန်းအားကိုအသုံးပြုပြီးလည်ပတ်တဲ့ နော်ဝေ၊ဆွစ်စာလန်၊အာဂျင်တီနာ က လျှပ်စစ်ထုတ် Turbine တာဘိုင် တွေပါ၊
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိုယ်းရေနှင်းရေကနေ ရေမြောင်းချောင်းအိုင်ရေကန်မြစ် သမုဒ္ဒရာ ဆီသို့ရေတွေစီးဆင်းကြတယ်၊ တဖန် အပူငွေ့ပြန်လို့မိုယ်းတိမ်တွေဖြစ်၊ မိုယ်းတိမ်ကနေမိုယ်းးရေတကျော့ပြန်လည်ပတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပါ၊ ဆိုလိုတာက နှစ်စဉ် ရေအားရမယ်၊( ရေနံဓာတ်ငွေ့လို)၊ငွေကုန်ကျခံပြီးဝယ်ခြမ်းနေဘို့မလိုပါ၊
မြန်မာတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုမလိုလား အိပ်ချင်ဟန်ဆောင်တဲ့ နိုးရခက်ကြီးကြောင်ပါး၊
မရှုစိမ့်တဲ့ကြောင်ဝတုတ်ကြီး “ဖွ” ပြန်ပါပကောလား? ဧရာဝတီ ခမ်းခြောက် မယ်ဆိုပြီး စာကလေးချောက် လို တတွတ်တွတ်
ကြောင်ပါးတွေ “လွတ်” “တော်” တယ် နော်၊ အခြားနိုင်ငံရောက်လို့ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မသိနားမလည်သူတွေကို မငဲ့ညှာ မထောက်ထားနိုင် “ဘဝ မေ့” နေပုံရတယ်၊
က ရေအားပြင်းလို့ ရေအားလျှပ်စစ်အများဆုံထုတ်နိုင်တယ်၊ယျေဘုယျ အားဖြင့်ဆိုရင် အခြား သာမန်အမေရိကန် လျှပ်စစ်ထုတ် ရေကာတာတို့ထက်တောင် မြစ်ဆုံ ရေကာတာ က ၁၀ ဆ ကျော် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VII တွင်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပြီးပါပြီ
ရေတွေခမ်းခြောက်အောင်မလုပ်ပါ၊ အလကားလိုက်ချောက်တာ၊ ယောင်ပြီးလိုက်အော်နေတာ)၊
ဘယ်မှာလဲ ခမ်းခြောက် တာ? သက်သက် လိမ်ညာတာ သူများ ထောင်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက် ယောင်ပြီ လိုက်အော်
Australia ရေကာတာ များ (ရေအားပြင်းလေ လျှပ်စစ်စွမ်းအား
ဘယ်မှာလဲ ခမ်းခြောက် တာ? ———————
Norway ရေကာတာ များ (ရေအားပြင်းလေ လျှပ်စစ်စွမ်းအား
မပြတ်ကြားသိမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီလိုရိုင်းစိုင်းနေတဲ့မြစ.. လက်မခံသင့်လို့ ထင်တယ်ဗျ မြစ်ဆုံကိုရေကာတာဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် အောက်ပိုင်းက
ပြည်သူတွေ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ လူတွေငတ်ပြတ်ကုန်မှာပေါ့ ဧရာဝတီဆိုတာလဲ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး
မြစ်ကြီးရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်သန်းပေါင်းစွာကြာခဲ့ပြီဆိုလားပဲ သက်တမ်း ရင့်မြစ်ကြီးကို ဘာကြောင့်ပျက်စီးအောင်လုပ်ချင်ရတာလဲ
ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ မိခင်ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကိုတော့အထိနာမှာအရမ်းစိုးရိမ်မိတယ်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောကို
ဝမ်းနည်းရတော့မယ် ဧရာဝတီ လူတွေရက်စက်တတ်ကြတာ
မြန်မာပြည်ရဲ့အသက်သွေးကြောဧရာဝတီကိုတော့ မစတေးသင့်ပါ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာလေးတခုပြောပါရစေဧရာဝတီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့
လုံးရေအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ ၈၁ % မြေဧရိယာအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ဝ.၀၆ % (၁၆ချိုး တစ်ချိုး သာ)
မြန် မာ ပြည် သူ တွေ ရေ သုံး ခွင့် မ ရ သ လို သူ တို့ လည်း ဒီဘဝ မှစ ပြီး သံ သ ရာ အ ဆုံး အ ထိ ရေ သောက် သုံး ခွင့် မ ရ တဲ့ ရေ ငတ် သူ များ ဖြစ် ပါ စေ
ဧရာဝတီကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့ South Africa ကရေကာတာ အချို့
ရေမခမ်းပါ၊ ရေခမ်းမယ်ဆိုပြီး သူမြားက ချောက်လို့အလကားနေရင်းထိုင်ရင်းအတွေးခေါင်နေတာ
—————— Philippines ဖီလစ်ပိုင် ရေကာတာ
UK ယူကေနိုင်ငံ ကရေကာတာ ၂၁၂၀ မြန်မာက ၂၆၇
လုံးရေအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ ၇၉၄.၀၀ % ရှစ် ဆ မြေဧရိယာအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ ၀.၃၆ % ဘဲ (၃ချိုးတချိုး)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နိုင်တာက ရေခမ်းမယ် ဆိုတဲ့ ငါတို့ရဲ့စွဲစွဲမြဲမြဲ ခံယူချက်အတိုင်း လျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာ တခုခု ရှေ့မှာ
ရေကာတာ မလုပ်ဘဲနဲ့ သူ့ဟာသူ နဂိုရ်ကသောင်တင်တာကိုရှင်းနိုင်ဘို့ တရုပ်ဆီက သောင်ရှင်းသင်္ဘော၁၉ စီးကို နှုန်းသက်သာတဲ့ချေးငွေနဲ့ဝယ်
ပြသနာကြီးမဟုက်ပါ ဖြေရှင်း ပြီးသားပါ၊ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ မြစ်ဆုံရေကာတာလုပ်ပေမဲ့လဲ ရေတွေကတသွင်သွင်စီးနေမှာမို့
USယူအက် ဒေါ်လာ သန်း ပေါင်း ၃ သောင်း US $ ( ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၀၀၀)ကုန်ကျမဲ့ CRHP(ဆုံစည်းရာဒေသကြီးရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီး)
မှာ ခုနှစ်ပိုင်းရှိပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်ဧရာဝတီမြစ်တလျောက်မှာလုပ်ဘို့ပါ၊၊ ၎င်းတို့ အနက်မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ က တ စိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်၊
မြန်မာ လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ၁၅ % (အခမဲ့ရလိုက်တယ်) မြန်မာအာရှကမ္ဘာ Asia World………… ၅ %
MegaWatt (MW) မီဂါဝတ် စုစုပေါင်း ၂၀,၀၀၀ အနက် မြစ်ဆုံ က မီဂါဝတ် ၆,၀၀၀ ထုတ်ဘို့ ရှိပြီး၊
(ရောင်းတယ် ဆိုတာ တရုပ်က လျှပ်စစ်အား ၉၀ %ကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတယ်၊ မြန်မာကသာ ၁၀% အင်အားကို အခမဲ့ရလိုက်တယ်၊ ရောင်းရငွေပေါ် မြန်မာကအခွန်ကောက်ပြီးနောက် လည်ပတ်မှု
မှာ၊ ၁၀ % ၉၀ % အသာလွတ် ခွဲဝေတယ် ဆိုတာ က စိတ်ကြွအောင် စကားကို လှည့်ဖြားလုပ်ကြံ
၎င်းမှ ရေအားလျှပ်စစ် ၂၆၂ KW ရကာ ရန်ကုန် အပါအဝင်သုံးရလို့အဆိုးသက်သာ) 90 percent of the electricity from Myitsone is slated for export to neighboring China while Myanmar would accrue the remaining 10 percent “for free” – although the Sino-Myanmar joint venture in charge of the project, Upstream Ayeyawady Confluence Basin Hydropower Co. Ltd. (ACHC), stresses that the Myanmar government would have “first refusal for the rest [90%] of the electricity generated by the hydropower plant.”
နှစ် ၅၀ မှာ မြန်မာက ၅၄ ဘီလျံ $ ရမယ်၊ ပုံပါ ၅၄ ကြိမ် ၅၄ ဆပါ၊
တရီး လျံ ကဘီလျံ တထောင် $ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀$) သုည “၀” ၁၂လုံး
မစ်ဆုံဟာ တရုတ်ပဲအကျိုးရှိတာ မြန်မာက ရမှာဆိုးကျိုးချည်းပဲ သိတင်းစာတွေပြန်ရှာကြည့် ကိုယ့်နိုင်ငံကရမှာ%နဲနဲပဲရမှာ
နောင် မျိုးဆက်သစ်တွေကျအရင်တိုင်းတာလို့မရအောင် (စိုး) ကျိုးတွေခံစားရရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
တရုတ်က 80 % အစိုးရက 15 % ဦးပိုင်က5% ။ ကဲ … ဘယ်သူပို ချမ်းသာမလဲ။ · ကိုယ့်နိုင်ငံ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်းနှုန်းရမှာလဲ ဖြေပါဦး
…… အခု မြစ်ဆုံမှာ မြန်မာ ဘယ်လောက် တရုတ် ဘယ်လောက် ရမှာလဲ။ အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေပုံ မျှတရဲ့လား။ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပါ၊
……. ရေးရေး အကျိုး အမြတ် ခ္ဓဲဝေမှူက ငါတို့ ပြည်သူတ္ဓေအတ္ဓက်က မယားငယ် လစာ လောက်တောင် မရတ။
ဂျစ်စူ says: တခါတလေ ကျောင်ကျီးတို့ လို ဘားမှ နားလည်ပဲ ဖင်ပိတ်ကန့် ကွက်နေတာတွေ မြင်ရင် အားကျီး ဆိတ်ပိန်တယ်